Wararka Maanta: Jimco, Aug 3 , 2012-Madaxda DKMG ah oo u dhoofay Nairoib halkaasoo ay kula kulmayaan Xoghayaha Arrimaha dibadda ee Mareykanka
Madaxweynaha Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta gallinkii dambe ka dhoofay Muqdisho, halka guddoomiyaha baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan uu shalya gallinkii dambe dhoofay, sidoo kalena waxaa saakay dhoofay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, C/weli Maxamed Cali.
Kulanka madaxda Soomaalida iyo Clinton ayaa waxaa lagu soo qaadi doonaa arrimo ay ka mid yihiin ammaanka iyo sidii xilliga KMG ah loogu soo afjari lahaa bishan 20-keeda oo ahayd waqtigii horay loogu qabtay, si ay Soomaaliya u yeelato dowlad dhameystiran.
Sidoo kale, kulanka ayaa waxaa lagu soo qaadi doonaa qodidda shidaalka ay Puntland ka billowday deegaannada ay ka taliso, iyadoo Mareykanka uu xilliyadii ugu dambeysay aad indhaha ugu hayay Soomaaliya, isagoo ku talinayay in xasillooni lagu soo dabaalo.
Dhanka kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa soo dhaweysay ansixintii dastuurka KMG ah ee Soomaaliya, kaasoo maalin ka hor ay cod aqlabiyad ah ku ansixiyeen 621-ergay oo ka mid ahaa 645-ergay oo soo xaadiray kulankii lagu ansixinayay dastuurka.
"Waxaan hambalyo u diraynaa ergadii Soomaaliyeed ee ansixiyay dastuurka KMG ah, wuxuuna dastuurka saldhig u noqonayaa hannaan lagu dhisayo dowlad joogto ah oo ay Soomaaliya yeelato. Ansixinta dastuurkana waxay ahayd mid taariikhi ah," ayaa lagu yiri warbixinta kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka.
Madaxda Soomaalida ayaa waxay dadaal ugu jiraan inay 20-ka Ogoosto kusoo af-jaraan xilliga KMG ah, iyadoo lagu wado in maalmaha soo socda lasoo magacaabo xildhibaannada cuusb ee Soomaaliya, kuwaasoo dooran doona guddoomiye cusub oo baarlamaan iyo madaxweyne.